Silicon Power Armor A65M Shockproof yangaphandle Drive | Ndisuka kuMac
Silicon Power Armor A65M Shockproof yangaphandle Drive
Enye yeenketho esinazo namhlanje malunga nokugcinwa kukuthenga iidrives zangaphandle. Olu khetho lunokudlula ezinye iinkqubo zelifu kubasebenzisi abaninzi ukusukela oko ukunikezela ngokhetho lomzimba luhlala lunomdla. Inyaniso kukuba i-Silicon Power inikeza izisombululo ezinomdla zolu hlobo kulabo bafuna imemori eyongezelelweyo kumaxwebhu, iifayile, idatha kunye nabanye.
Ngeli xesha siye safumana ithuba lokuvavanya entsha I-Silicon Power Armor A65M eyidrive enzima enesatifikethi se IP67. Kule meko, yenzelwe ukujamelana neemvavanyo ezinzima kakhulu kunye nokuwa, inokhuseleko olongezelelweyo kulabo bafuna ukuchasana okukhulu malunga nokuwa okunokwenzeka, amanzi, njl.
Thenga idiski yakho yeSP Armor A65M apha
1 I-Military-grade shockproof kunye ne-Mac drive engenamanzi
1.1 Ukulungele ukudibanisa kunye nokugcina umxholo
2 Ezinye zezona nkcukacha ziphambili zale Armor A65M
3 Eyona nto ingcono ngaphandle kwamathandabuzo lixabiso layo lemali
I-Military-grade shockproof kunye ne-Mac drive engenamanzi
Ngaphandle kwamathandabuzo, ngalo mzuzu siyikhuphayo kwibhokisi siyaqonda ukomelela kolu kuqhuba lwangaphandle. Singatsho ukuba yenye yezona zityebileyo esizibonileyo kolu tyikityo lweSP, iphakame kakhulu kune-A62 okanye iBolt B75 Pro ngokobungakanani. Ukusinika ingcamango, imilinganiselo yi-143,4 x 86,7 x 20,7mm kwaye inobunzima phakathi kwe-242 kunye ne-277g ngokuxhomekeke kumthamo.
Inqanaba layo lomkhosi liyenza ibe yenye yezona zinto zinzima zangaphandle zokuqhuba esizibonileyo kwi-Mac.Yongeza iileya ezi-3 zangaphandle zokhuseleko, iileya ezimbini zerabha, kunye nenkqubo yokunqunyanyiswa yangaphakathi yokhuseleko oluqinisekisiweyo kumaqhuqhuva okanye amathontsi ngengozi. Le diski entsha yeSilicon Power ihambelana ne-MIL-STD-810G 516.6 Inkqubo IV ke ungakhathazeki malunga nokuxhathisa kwayo xa unokuwa ngengozi.
Uyilo lwayo lwangaphakathi lukwayinxalenye yesi siqinisekiso kwaye kukuba Ulwakhiwo lwe-unibody lunciphisa iindawo zokuqhawula ngoko kuba nzima ngakumbi kwisithonga ukuba sonakalise. Ngokungathandabuzekiyo lo lolona phawu lwakhe lukhulu ngaphandle kwamathandabuzo.
Ukulungele ukudibanisa kunye nokugcina umxholo
Eyona nto ingcono kukuba le diski njengoko siyikhuphile kwibhokisi sele yongeza ifomathi ehambelana ne-macOS. Nangeyiphi ndlela singasoloko sifomatha idiski kwaye songeze ifomathi esiyifunayo ukuyisebenzisa nakweyiphi na ikhompyutha okanye isixhobo. Kodwa kwabo bangenayo okanye abafuni ukwenza nantoni na xa idiski ifika, ngaphandle kokudibanisa nokugcina umxholo, oku kukhethekileyo kubo.
Ezinye zezona nkcukacha ziphambili zale Armor A65M
Ngokuphathelele iinkcukacha, kubalulekile ukuqaphela ukuba kunjalo idiski enoqhagamshelwano lwe-USB A. Oku akuthethi ukuba idiski inesantya esicothayo okanye ngaphantsi kakhulu kwaye uqhagamshelo yiSuperSpeed ​​​​USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) iyahambelana nezixhobo ezininzi esinazo namhlanje. Ngokusengqiqweni, iiMacs ezintsha ezongeza izibuko le-USB C azihambelani nale diski yangaphandle, kodwa kubo kukho ezinye iindlela ezinomdla kakhulu kwiSilicon Power.
Zezi iinkcukacha eziphambili yale A65M idiski yangaphandle:
Okokuqala kuluhlu lwayo ukuhlangabezana ne-IP67 uthuli / ubungqina bokungangeni manzi
* Ngokuthobela umgangatho we-IP67, ikhusela ekungeneni kothuli kunye nokuntywiliselwa emanzini ngaphezu kwemizuzu engama-30 kubunzulu bokufikelela kwi-1 yeemitha.
* Le mveliso inokusebenza ngokugqibeleleyo phantsi kosetyenziso oluqhelekileyo, ngoko ke nceda ungayiyeki ngabom. Ukuze ufumane ukhuseleko olupheleleyo, nceda ugcine i-USB isinxibelelanisi isiciko endaweni xa ingasetyenziswa.
Inketho yokongeza intambo ngasemva
Isalathisi se-LED xa sidibanisa
Inkqubo yokunqunyanyiswa kwe-hard drive yangaphakathi
Isoftware yokukhuphela yasimahla ye-SP-Widget ibonelela ngemisebenzi enamandla efana nokugcinwa kwedatha, i-256-bit AES encryption, kunye nokugcinwa kwelifu lolawulo olusebenzayo lwedatha.
Sifumana iimodeli ezimbini ezahlukeneyo ngokwemiqathango yokugcina yale diski yangaphandle. Enye enomthamo we-1TB kwaye le siye savavanywa kuyo NdiyiMac equka umthamo we-2TB.
Eyona nto ingcono ngaphandle kwamathandabuzo lixabiso layo lemali
Kwaye kukuba ixabiso livela kwi-90 yemodeli ye-1TB ukuya kwi-euro eyi-102 ukuba imodeli ye-2TB ixabisa. Kunzima ukufumana amaxabiso afanayo kwi-Silicon Power disks kunye nomthamo wokugcina kunye ekwanikezela ukuxhathisa ekuweni okunokwenzeka, izithonga okanye amanzi.
Sisebenzise iidrive ezininzi zangaphandle kwaye ezi zivela kwi-SP ngaphandle kwamathandabuzo zibalaseleyo. Umgangatho wezinto eziphathekayo ngokweendawo zokuhlala ngenye yezona zinto zihamba phambili kwiimarike, zinika izisombululo ezahlukeneyo ngokuxhomekeka kwiimfuno zomsebenzisi. Bambalwa abavelisi abanalo olu hlobo lwe iimveliso ezinamaqondo ahlukeneyo okhuseleko ngokweemfuno zomsebenzisi ngamnye.
Ukuba ukhangele idiski yangaphandle echasene nokuwa, uthuli, amanzi kwaye ekugqibeleni idiski exhathisayo, le SP Armor A65M ingaba yinto ekhethekileyo. Kufuneka uhlale ukhumbula ukuvala isiciko kakuhle xa ungasisebenzisi kwaye yiloo nto. Ngokubanzi, yidiski yedabi kuwo wonke umhlaba. Uyilo kunye nomgangatho wezinto ezisetyenziselwa ukwenziwa kwayo zigqwesile, awuyi kuba neengxaki zalo naluphi na uhlobo ngezi Silicon Power.
I-Silicon Power Armor A65M
Inani lokudluliswa kwedatha
Ukothuka, ukunganyangeki kwamanzi kunye nothuli
Ubungakanani ngokubanzi bukhulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Silicon Power Armor A65M Shockproof yangaphandle Drive